Atụmatụ nke Moto E6 Play abanyelarị na foto | Androidsis
Wepụtara atụmatụ nke Moto E6 egwuregwu
Motorola hapụrụ anyị ọtụtụ ụdị n'ime usoro akụ na ụba ya kachasị mma n'afọ a. Oge kacha nso n’ime ha bụ Moto E6 Plus, nke na-abịarute na Spen izu ole na ole gara aga. O yiri ka n'oge na-adịghị anya, anyị nwere ike ịtụ anya ekwentị ọhụrụ na ezinụlọ a nke ika, nke ga-abụ Moto E6 Play.
Ihe ohuru Moto E6 Play amalitela nyocha na ntanetị. Ngwaọrụ imepụta agbachalarị, ka anyi wee mata ihe banyere ya. Na mgbakwunye, ụfọdụ n'ime nkọwa ya agbapụwokwa, yabụ anyị nwere ike nweta echiche doro anya nke ngwaọrụ ahụ.
N'ịbụ onye nlereanya na ụdị dị mfe nke ika ahụ, anyị nwere ike ịhụ na Moto E6 Play a anaghị emepụta ihe ọ bụla ọkachasị n'ihe gbasara imepụta. Ihuenyo na okpokoro agba elu na ala, na-echetara atụmatụ nke ekwentị anyị hụrụ na ahịa ruo ọtụtụ afọ, mana maka otu afọ ha adịchaghị ala.
Eziokwu bụ na ọ dị ka Moto E6 nke ọnwa atọ gara aga. A otu igwefoto na-echere anyị na azụ nke a ekwentị, na Ikanam flash na anyị na-ahụ akara mkpisiaka aka, dị ka a na-adịghị ahụkebe na mpaghara dị obere karị na gam akporo. Ihe ijuanya nye ọtụtụ.
Anyị nwere ike ịhụ na Moto E6 Play a ga-enwe ụda isi okwu, tinyere ọdụ ụgbọ mmiri microUSB. Ha bụ ihe abụọ anyị na-ahụkarị na ekwentị n'ime ọkwa kachasị dị ala na gam akporo, yana anyị bụkwa kpomkwem na nke a. Enweghị nkọwa ọ bụla ewepụtara n'oge a.
On mgbe anyị nwere ike ịtụ anya na a Moto E6 Play na-ukara ọ dịghị data. Dị ahụ akwadoghị ịdị adị nke ekwentị a ruo ugbu a. Yabụ, anyị ga-echere ka a mara anyị, mana ọhụụ ọhụrụ a nwere ike bụrụ nke gọọmentị tupu njedebe nke afọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Wepụtara atụmatụ nke Moto E6 egwuregwu
HTC na-ebupụta ekwentị ọhụụ ọhụrụ nke Ọpụpụ 1s
Samsung nwere igwefoto n'okpuru ihuenyo ga-abata na mmalite nke afọ